Réponses pour «ankizy»:
Fiofanan'ny mpanentana ny ankizy Nandray anjara tamin'ny fiofanana nokarakarain'ny Fikambanana Hay Kanto sy ny EIF (Ezaka Ifampizaràna ho Fampandrosoana),ny 20-30 Aprily 2015 teny Androhibe I Hanitra, Totoa Voahangy, Lucie, Jocelyne, Eric.
TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 96%
ZIONA VAOVAO TANTARA 54%
Ny ankizy izany dia ho Sekoly Alahady ziona vaovao, ny vehivavy ho Dorkasy ziona vaovao, ny Lehilahy ho lehilahy ziona vaovao.
Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 51%
lalampanorenana 2010 45%
- ny Fifanarahana mikasika ny zon'ny ankizy, ny zon’ny vehivavy, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny zo ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-politika, isam-batan’olona ary arakolontsaina ;
Tsangambato ireo laharan=ny gazety TADY nitsidika anao nandritra izay 25 taona izay Tsangambato koa no ilazana ny asa fanasoavam-bahoaka vitan=ny olona na fikambanana, na firenena iray na maromaro, toy ny trano, ny sekoly, ny foyer, ny hopitaly, ny hospice, toy ny fanam piana tsy tapaka amin=ny alàlan= ny vola aman-karena, fahaizana sy fahalalana ny toeram-pitaizana sy fanabeazana ankizy sy tanora, be antitra na kamboty.
AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 33%
Ankizy sy Tanora tia ny fahadiovam-po, mandrava fankahalana sy ny rindrin’ny fisarahana, ary ho Fitiavana eo anivon’ny Fiangonana no tanjona amin’izao JMJ Mada-8 izao.
Adidiny amin’ny ny fahasalamam-bahoaka, eo amin’ny fanabeazana ny ankizy, ny fandriampahalemana, ny fotodrafitrasa madinika sy salasalany izay miteraka asa ho an’ny manodidina, sns ?
Bulletin Mensuel Tresor N37 24%
Tena faly izahay fa tsy natao tany lavitra andriana.» Natao dallage ny efitrano fianarana ao anaty fotaka ny ankizy ary ny bibilava no miaraka amin’izy ireo ao.
COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel 11%
Children (ankizy pluriel) Women (vehivavy pluriel) Men (olombelona pluriel) Lady (tovovavy: